Madaxweynaha DKMG Soomaaliya oo Maanta Saxiixay Qorshe la doonayo in Somalia lagu Xasiliyo Sannadaha soo socda | Subulaha News Network
You are here : Subulaha News Network » NEWS » Madaxweynaha DKMG Soomaaliya oo Maanta Saxiixay Qorshe la doonayo in Somalia lagu Xasiliyo Sannadaha soo socda
Posted by admin on August 8th, 2012 11:14 PM | NEWS Muqdisho(Subulahanews)- Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta oo Arbaco ah qalinka ku duugay qorshe lagu doonayo in lagu xasiliyo dalka Soomaaliya afarta ee soo socota, kaasoo ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan dowladda iyo saraakiil hore.
Munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu saxiixay heshiiskan, waxaana goobjoog ka ahaa dublamaasiyiin ka socday beesha caalamka kuwaasoo gacan ka geystay diyaarinta qorshahan.
“Waxaa farxasd weyn ii ah inaan maanta saxiixo qorsaha xasilnta dalka oo muddo dheer laga soo shaqeynayay, waxaana u mahadceliayaan wasaaradihii, saraakiishii iyo dowladihii aan saaxiibka ahayn ee mar walba nala garab taagnaa talada iyo wixii kale ee loo baahan yahay,” ayuu yiri Sheekh Shariif oo munaasabadda saxiixa ka hadlay.
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu sheegay in barnaamijkan uu yahay midkii afarta sano ee soo socota lagu xasilin lahaa dalka, isagoo xusay in dal walba uu leeyahay qorshe Qaran, kaasoo ka billowda amniga oo la’aantiis aysan jiri karin dowlad.
Ra’iisul wasaraha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali oo ka hadlay munaasabadda ayaa isaguna sheegay in qorshahan uu ka mid ahaa howshii xasiilnta dalka ee ka mid ahayd Roadmap-ka, gaar ahaan dhinaca amniga.
“Sharaf weyn bay noo tahay in madaxweynuhu uu maanta saxiixo qorshe dalka lagu xasilinayo oo muddo laga soo shaqeynayay, xukuumaduna ay dadaal badan gelisay, sababtuna waxa weeye in Soomaaliya ay kaga baxdo dhibaatadii ay muddada dheer kusoo jirtay,” ayuu yiri Cabdiweli Gaas.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isaguna goobta ka hadlay ayaa xusay inay tahay in loo maahdceliyo cid walba oo gacan ka geystay dajinta qorshahan oo uu ku sheegay mid muhiimad gaar ah u leh in Soomaaliya ay dib ugu laabato sidii ay ahaan jiray sannado badan oo colaado ah kaddib.
“Runtii waxaan u mahad-celinaynaa dadkii kasoo shaqeeyay qorshahan, haddii ay yihiin Soomaali iyo ajnabi, dal aanay nabadi ka jirinna horumar ma gaaro, waxaana rajeynayaa in qorshahan uu noqdo midkii Soomaaliya ay kaga bixi lahayd dhibka ay muddada kusoo jirtay,” ayuu yiri Shariif Xasan.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay in dadkii kasoo shaqeeyay qorshahaan ay taariikhda geli doonaan. isagoo xusay inuu yahay qorshahan mid aad u fiican balse looga baahan yahay shacabak Soomaaliyeed inay si wadajir ah uga shaqeeyaan xasilinta dalka.
Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirrada dowladda, xildhibaannada uu waqtigoodu sii dhammaanayo iyo mas’uuliyiin kale, iyadoo qorshahan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo loo sameeyo Soomaaliya.
« Dagaalyahannada Al-shabaab oo weerar ku dilay Guddoomiyihii ay Dowladda KMG ah u magacowday Deegaanka KM-50
Ciyaar Aad uxiiso Badan oo dhex martay Labada Kooxood ee ka kala socday Meecaad Stationary & Telesom Company oo ka dhacday Garoonka khayriyada Borama (Sawiro) »